हे फुर्सदिला तिमीहरू हो मैले प्रचण्ड मरेपनी क्यै हुन्दैन भनेको छैन : रवि लामिछाने - Ratoparda TV
चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले ‘प्रचण्ड मरे पनि केही हुदैन’ भन्ने आफूले भन्दै नभनेको कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्नेहरुलाई वास्तविकता बुझ्न अनुरोध गर्दै एक विज्ञप्ति फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौ कि जनता जनता जस्ता नभएर कार्यकता जस्ता भए भने मुलुकले परिर्वतनको महशुस गर्न सक्दैन । अधिकांश जान्ने सुन्नेहरु आफ्नो आस्था, आफ्नो ज्ञान आफ्नो विश्वास भन्दा बाहिर दुनिया नै छैन छन्दछन् । व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति गलत भए विरोध गरिन्छ नै गरिन्छ । विवेकले काम गरेन भने वेग्लै कुरा हो तर पार्टी हेरेर, नेता हेरेर, विरोध र समर्थन गर्न हामी सक्दैनौ।
बिषय वस्तु अनुसार अधिकांश आलोचना सरकारकै हुन्छ कारण खबरदारी खासमा सरकारलाई नै गर्नू पर्ने हुन्छ र सञ्चार माध्यम भनेको प्रतिपक्ष जस्तो पनि हो । हामी बेलाबेलामा विभिन्न नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुका काम, कारवाही र अभिव्यक्तिमा टिप्पणी गर्दछौं । देशका सबै दल र पछिल्ला तिनै प्रधानमन्त्रीका बिषयमा आवश्यकता अनुसार नरम गरम खरो दरो तरिकाले सीधाकुरा राखेका छौँ ।
प्रिय सरहरु ७ सालमा तपाईको के योगदान थियो, १७ सालमा, ३६ सालमा ४६-४७ सालमा ? हरेक मानिसले आफ्नै युगमा, आफ्नै क्षेत्रबाट योगदान दिने हो । आज म त्यसै बन्दुक बोक्दै हिड्नु, प्लेन हाइज्याक गर्नु, देशका लागि योगदान दिने दिन क्यालेण्डरमा लेखेर पहिले नै राखिन्छ र ? आँफू जन्मेको युगको आवश्यकताको आधारमा, आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको योगदान दिने हो र योगदान नै नदिएका नागरीकको पनि हक हुन्छ अधिकार हुन्छ ।